ProjectLibre: yakavhurwa sosi chirongwa chirongwa manejimendi | Linux Vakapindwa muropa
ProjectLibre iri chirongwa manejimendi manejimendi Vhura sosi, inomhanya papuratifomu yeJava, ichibvumira kuti iitwe pane akasiyana masisitimu anoshanda. Pari zvino ndiyo huru yakavhurwa sosi imwe nzira yeMicrosoft Project.
ProjectLibre iri inoenderana zvizere neMicrosoft Project 2003, 2007 uye 2010 mafaera. Iyi purogiramu yakatogamuchirwa munyika dzinopfuura mazana maviri nemakambani makuru. Naizvozvi, hurumende, mabhizimusi madiki nemasangano asiri epasi rese ari kubatsirwa nemashandiro awo.
Chinangwa cheProjektiLibre ndeyekupa yemahara uye yakavhurwa sosi yeprojeki manejimendi software pasi rese uye nekupa yakazara yakazara manejimendi manejimendi maficha.
ProjectLibre inoshanda zvakafanana ne Microsoft Project , ine inowirirana mushandisi mushandisi, yakapusa kushandisa uye yakafanana neMS Project, inopa mashoma mashoma akazara mashandiro.
Nayo tinogona kuita Gantt machati uye PERT machatiPamusoro peizvozvo isu tinogona zvakare kugadzira RBS madhirama, echimiro chekuongorora zviwanikwa, uye WBS madhirama, eiyo basa kuora chimiro.
Pakati pezvakakosha maficha kubva kuProjektiLibre isu tinogona kuratidza:
Iyo ine rutsigiro rweMicrosoft Project 2010.
Inotendera manejimendi yeiyo kukosha kukosha
Resource analytical mamiriro dhayagiramu.
Basa rekuparadza chimiro dhizaini.
Basa rekushandisa mishumo
Tumira kubva uye kutumira kunze kuMicrosoft Project 2010.
Tumira kune pepa PDF
Iyo nyowani ribhoni-yakavakirwa mushandisi interface.
Tsigiro izere yeMicrosoft Project 2010.
1 Maitiro ekuisa ProjectLibre paLinux?
2 Maitiro ekuisa ProjectLibre kubva kunobva kodhi
Maitiro ekuisa ProjectLibre paLinux?
Kana iwe uchida kuisa ichi chishandiso pane yako system, tinofanira kuenda kune peji rako uye muchikamu chayo chekurodha tinokwanisa kuwana ekuisa mapakeji, tinokwanisa kurodha pasi kubva pane iyi link.
Pano isu ticha dhawunirodha yazvino sarudzo, iri mune iyi 1.8.0.
Wakatotora pasuru yacho kare, yenyaya yaDebian, Ubuntu uye zvigadzirwa Tinogona kuzviita nenzira inotevera, isu tichaenda kuvhura terminal uye nekuita unotevera kuraira:
Kana zvichidikanwa, isa kuderera kwepurogiramu nemurairo:
Kana iri Fedora, OpenSUse, CentOS, uye zvigadzirwa zvinotsigira. rpm, iwe unofanirwa kuita zvinotevera kuisa iyo ProjectLibre maneja weprojekiti.
Ivo vanofanirwa kurodha pasi iyo rpm faira kubva chinotevera chinongedzo. Pane imwe yakadhindwa, vanoiisa nemurairo unotevera mune imwe sarudzo:
Kana iwe uchida kuisa ProjectLibre MuArch Linux uye zvigadzirwa tinogona kuzviita kuburikidza neAUR repository.
Kune izvi isu tinofanirwa kunge takaigonesa mune yedu pacman.conf faira. Kuti tiite kuiswa isu tinongofanira kunyora zvinotevera:
Maitiro ekuisa ProjectLibre kubva kunobva kodhi
Para zvimwe zvese zvekuparadzirwa kweLinux kana tichida kuisa chirongwa ichi isu tinofanirwa kurodha pasi sosi kodhi yeiyi.
Tiri kuenda kunotora yazvino vhezheni yechirongwa ichi kubva pano.
Waita kurodha pasi, kana uine vhezheni yapfuura unofanirwa kuidzima nemirairo iyi:
Iye zvino isu tinofanirwa kusunungura iyo faira rakadzingwa mune yakasarudzika folda yesystem yedu, tinoita izvi nemirairo inotevera:
Tatova nemafaira asina kuvhurwa mufaira, tinofanira kuipa zitaKana kuita unotevera kuraira kuchikundikana neshoko rinotanga na "mv: zvisingaiti kunyora zvisiri-dhairekitori", ruka danho iri;
Kana tichida kutanga chirongwa isu tinongofanirwa kutaipa mune terminal:
Iye zvino ngatisikei iyo nzira ipfupi kubva pachishandiswa nemurairo uyu:
Y isu tiri kuzopa mvumo yekuuraya:
Uye isu tinozvigadzira pane desktop yedu ne:
Uye neizvi isu tichava neyakaiswa application yakagadzirira kushandiswa musystem yedu.
Kana iwe uchiziva nezve chero chimwe chirongwa chakafanana neProjektiLibre kana chero imwe, inzwa wakasununguka kuigovana nesu mumashoko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » ProjectLibre: yakavhurwa sosi chirongwa chirongwa manejimendi
Ini ndicharatidza kuti ini ndatova nechirongwa chekupedzisira, ndatenda nekurudziro. Kwaziso :)
Jesu Herrera akadaro
Yakanaka dzidziso. Ndakaiisa paMoksha distro uye iyo debiam package yekuisa yakanga yatadza. Ini ndakatevera mirairo yeUbuntu uye inoshanda mushe
Pindura Jesús Herrera